ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် တစ်ဝှမ်းရှိ မိဘပြည်သူများသို့ နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ပြောကြားသည့် နှစ်သစ်ကူးမိန့်ခွန်း
ယခုလို နှစ်သစ်ကူး အခါသမယမှာ မိဘပြည်သူတစ်ရပ်လုံး ပျော်ရွင်ခြင်း၊ ငြိမ်းချမ်းခြင်းများနဲ့ ပြည့်စုံပါစေလို့ ဆုတောင်းမေတ္တာ ပို့သပါတယ်။
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် တစ်ဝှမ်းရှိ မိဘပြည်သူများသို့ နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က ရေဒီယို အစီအစဉ်များမှတစ်ဆင့် ပြောကြားမည့် နှစ်သစ်ကူး မိန့်ခွန်းကို ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်နေ့ နံနက် ၇ နာရီမှ စတင်ပြီး မြန်မာ့အသံ ရေဒီယို အစီအစဉ်နှင့် အက်ဖ်အမ်ရေဒီယို အစီအစဉ်များမှ နှစ်နာရီ တစ်ကြိမ် ထုတ်လွှင့် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း မိဘပြည်သူများအား အသိပေးအပ်ပါသည်။
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ဘဏ္ဍာရေးကော်မရှင် (၃/၂ဝ၁၂) အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက် အမှာစကား ပြောကြား
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဘဏ္ဍာရေးကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်သည် ယနေနံနက် (၉) နာရီခွဲတွင် နိုင်ငံတော်သမ္မတအိမ်တော် အစိုးရအဖွဲ့ အစည်းအဝေး ခန်းမ၌ ကျင်းပသည့် ဘဏ္ဍာရေး ကော်မရှင် (၃/၂ဝ၁၂) အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်၍ အမှာစကား ပြောကြားသည်။
ဒုတိယသမ္မတဦးဉာဏ်ထွန်း ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ယဉ်ကျေးမှု ဝန်ကြီးဌာန အနုပညာဦးစီးဌာနနှင့် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ စင်ကျန်း အဆို၊ အက အနုပညာ အဖွဲ့တို့၏ ပူးပေါင်းဖျော်ဖြေ တင်ဆက်မှုအား တက်ရောက်ကြည့်ရှု အားပေး
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန အနုပညာဦးစီးဌာနနှင့် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ စင်ကျန်း အဆို၊ အက အနုပညာ အဖွဲ့တို့၏ ပူးပေါင်းဖျော်ဖြေ တင်ဆက်မှုကို ဒီဇင်ဘာ ၃၀ ရက် ညနေ ၆ နာရီခွဲတွင် နေပြည်တော် ကောင်စီနယ်မြေ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်ရှိ မြန်မာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်း ဗဟိုဌာန (MICC) ၌ ကျင်းပရာ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဒုတိယသမ္မတဦးဉာဏ်ထွန်းနှင့် ဇနီး ဒေါ်ခင်အေးမြင့် တို့ တက်ရောက်ကြည့်ရှု အားပေးသည်။
ဒုတိယသမ္မတ ဒေါက်တာစိုင်းမောက်ခမ်း ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ပညာသင်နှစ် ထူးချွန်ဆုများ ချီးမြှင့်ပွဲ အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်အားပေး
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဒုတိယသမ္မတ ဒေါက်တာစိုင်းမောက်ခမ်းသည် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများ၊ ဒုတိယဝန်ကြီးများ နှင့်အတူ ယနေ့နံနက် (၉)နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်း ဗဟိုဌာန (MICC)၌ ကျင်းပသည့် ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ပညာသင်နှစ် ထူးချွန်ဆုများ ချီးမြှင့်ပွဲ အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက် အားပေးသည်။
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ဒုတိယအကြိမ် နိုင်ငံခြားအကူအညီ အထောက်အပံ့ စီမံခန့်ခွဲရေး ဗဟိုကော်မတီ အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်အမှာစကားပြောကြား
ဒုတိယအကြိမ် နိုင်ငံခြားအကူအညီ အထောက်အပံ့ စီမံခန့်ခွဲရေး ဗဟိုကော်မတီအစည်းအဝေးကို ယနေ့မွန်းလွဲ (၂) နာရီတွင် နိုင်ငံတော်သမ္မတအိမ်တော် အစိုးရအဖွဲ့ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပရာ နိုင်ငံခြားအကူအညီ အထောက်အပံ့ စီမံခန့်ခွဲရေးဗဟိုကော်မတီဥက္ကဌ နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် တက်ရောက်၍ အဖွင့်အမှာ စကားပြောကြားသည်။
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ဂျပန်နိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ်ထံ ဝမ်းမြောက်ကြောင်း သဝဏ်လွှာပေးပို့
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ထံမှ ဂျပန်နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်း ခံရသည့် မစ္စတာ ရှင်ဇိုအာဘေးထံသို့ ဝမ်းမြောက်ကြောင်း သဝဏ်လွှာပေးပို့ခဲ့သည်။
နိုင်ငံခြားအကူအညီအထောက်အပံ့ စီမံခန့်ခွဲရေးဗဟိုကော်မတီ (ဒုတိယအကြိမ်) အစည်းအဝေးတွင် နိုင်ငံတော် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ပြောကြားသည့် အဖွင့်မိန့်ခွန်း
ကျင်းပပြီးစီးခဲ့တဲ့ စီမံကိန်းကော်မရှင် တတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးမှာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးနှင့် လူမှုရေးပြုပြင် ပြောင်းလဲရေးအတွက် အခြေခံမူဘောင် ချမှတ်ခြင်း၊ နိုင်ငံတော် ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ဖို့အတွက် “အမျိုးသားဘက်စုံ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး စီမံကိန်း” အစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း၊ ပြည်တွင်းပြည်ပ ငွေပင်ငွေရင်းများဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်ရန် စီမံကိန်း လျာထားခြင်းနဲ့ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘဏ္ဍာနှစ်-အမျိုးသားစီမံကိန်း ဥပဒေ (မူကြမ်း) နဲ့ စီမံကိန်း ရည်မှန်းချက်များကို စီစဉ်ညှိနှိုင်း ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
ဒုတိယသမ္မတ ဒေါက်တာစိုင်းမောက်ခမ်း (၁၃) ကြိမ်မြောက် မြန်မာ့တိုင်းရင်းဆေး သမားတော်များ ညီလာခံဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်၍ မိန့်ခွန်းပြောကြား
(၁၃) ကြိမ်မြောက် မြန်မာ့တိုင်းရင်းဆေး သမားတော်များ ညီလာခံဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားကို ယနေ့နံနက် (၈) နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ မြန်မာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်း ဗဟိုဌာန၌ ကျင်းပရာ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဒုတိယသမ္မတ ဒေါက်တာ စိုင်းမောက်ခမ်းတက်ရောက်၍ မိန့်ခွန်းပြောကြားသည်။
ဒုတိယသမ္မတ ဒေါက်တာစိုင်းမောက်ခမ်း ၂၀၁၃ ခုနှစ် (၆၅) နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့ ကျင်းပရေး ဗဟိုကော်မတီ ဒုတိယအကြိမ် ညှိနှိုင်းအစည်းဝေးသို့ တက်ရောက်၍ အမှာစကား ပြောကြား
၂၀၁၃ ခုနှစ် (၆၅) နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့ ကျင်းပရေး ဗဟိုကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် ဒုတိယသမ္မတ ဒေါက်တာစိုင်းမောက်ခမ်းသည် ယနေ့ မွန်းလွဲ (၂) နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ ပြည်ထောင်စုအစိုးရ အဖွဲ့ရုံး အစည်းအဝေး ခန်းမ၌ ကျင်းပသည့် (၆၅) နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့ ကျင်းပရေး ဗဟိုကော်မတီ၏ ဒုတိယအကြိမ် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်၍ အမှာစကား ပြောကြားသည်။
(၂၇)ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲကျင်းပရေး ဦးစီးကော်မတီနာယက ဒုတိယသမ္မတ ဦးဉာဏ်ထွန်း နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ ဇေယျာသီရိမြို့နယ်နှင့် ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်တို့အတွင်းရှိ နိုင်ငံတကာအဆင့်မီအားကစားကွင်းများ၊ အားကစားရုံများ၊ ရေကူးကန်များတည်ဆောက်နေမှုနှင့်
(၂၇)ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲ ကျင်းပရေး ဦးစီးကော်မတီနာယက ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် ဒုတိယသမ္မတ ဦးဉာဏ်ထွန်းသည် (၂၇)ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင်အာရှ အားကစားပြိုင်ပွဲများအတွက် နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ ဇေယျာသီရိမြို့နယ်နှင့် ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်တို့အတွင်းရှိ နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ အားကစားကွင်းများ၊ အားကစားရုံများ၊ ရေကူးကန်များတည်ဆောက်နေမှုနှင့် အားကစား လေ့ကျင့်ရေးစခန်းများအား ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် လှည့်လည်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးသည်။
ဒုတိယသမ္မတဦးဉာဏ်ထွန်း ထိုင်းနိုင်ငံသတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေး နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး H.E.Mr. Anudith Nakomthap ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဒုတိယသမ္မတဦးဉာဏ်ထွန်းသည် ထိုင်းနိုင်ငံ သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေး နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး H.E.Mr. Anudith Nakomthap ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ယနေ့ ညနေ (၄) နာရီခွဲ တွင် နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံတော် သမ္မတအိမ်တော် သံတမန်ဆောင် ဧည့်တွေ့ခန်း၌ လက်ခံ တွေ့ဆုံသည်။
စီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ် တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရာမှာ ပြည်သူဗဟိုပြု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး မဟာဗျူဟာနဲ့အညီ ပြည်သူ့ဝန်ကိုဆောင်သော ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းများဖြစ်အောင် ရပ်ကျေး အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းမှ ပြည်ထောင်စုအဆင့်အထိ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာ အတွေးအမြင်၊ အမူအကျင့်၊ လုပ်ပုံလုပ်နည်းများ ပြောင်းလဲခြင်း လုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်သလို အစိုးရအဖွဲ့အစည်း ယန္တရားရဲ့ ဖွဲ့စည်း တည်ဆောက်ပုံ ပြောင်းလဲခြင်းကိုလည်း ဆောင်ရွက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အတွေးအမြင်၊ အမူအကျင့်၊ လုပ်ပုံလုပ်နည်းများ ပြင်ဆင်ရာမှာ ခေါင်းဆောင်မှု နေရာတွေမှာ တာဝန်ယူကြရတဲ့ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အဆင့်ကအစ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး အဆင့်အထိ ခေါင်းဆောင်ကောင်း အင်္ဂါရပ်နဲ့ ညီညွတ်အောင် ပြုမူကျင့်ကြံ အားထုတ်ဖို့နဲ့ ပြည်သူတွေ အားကိုးယုံကြည် စိတ်ချရအောင် ကြိုးစားကြဖို့ ပြောကြားလိုပါတယ်။(၂၆-၁၂-၂၀၁၂ နိုင်ငံတော်သမ္မတ မိန့်ခွန်းမှ)
Read more about yangonp@pomail.gov.mm
Read more about rakhinep@pomail.gov.mm
Wed, 09/05/2012 - 10:46
Read more about rakhinea@pomail.gov.mm
Wed, 09/05/2012 - 10:35
Read more about rakhinet@pomail.gov.mm
Wed, 09/05/2012 - 10:29
Read more about rakhineadv@pomail.gov.mm
Wed, 09/05/2012 - 10:21
Read more about ayeyarwadyp@pomail.gov.mm
Read more about ayeyarwadya@pomail.gov.mm
Wed, 09/05/2012 - 10:19
Read more about ayeyarwadyt@pomail.gov.mm
Read more about ayeyarwadyadv@pomail.gov.mm
ငြိမ်းချမ်းစွာစုဝေးခွင့်နှင့် ငြိမ်းချမ်းစွာစီတန်းလှည့်လည်ခွင့်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများ
ရခိုင်ပြည်နယ် ပဋိပက္ခကို မဟုတ်မမှန်လုပ်ကြံ၍ ပုံကြီးချဲ့ကာ သတင်းမှတ်တမ်းအဖြစ် ထုတ်လွှင့်ပြသရန် အယ်လ်ဂျာဇီးရား သတင်းဌာန၏ လုပ်ဆောင်ချက်များကို ပြင်းထန်စွာ ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်
Black List မှ ထပ်မံပယ်ဖျက်ပေးခြင်း